Nhau - 2020.7.9
Yedu kambani imwe-yekumira bhizinesi sevhisi kambani inosanganisa yekugadzira machira, chigadzirwa dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Chinhu chikuru chigadzirwa chinoshandisa yakazvimirira kutsvagisa nekusimudzira kwemachira, senge spandex latex (mafuta pamusoro / girazi pamusoro), uchishandisa warp yakarukwa nylon lining, jira iri rakatipoteredza, ina-nzira yakakwira elasticity maitiro, uye inosangana neCNAS yepasi rese yekubatanidza kusangana kwekuona. ; mhedzisiro yacho yakafanana Natural latex zvinhu, asi mutengo unongova 1/3 weiyo yakasarudzika latex jasi, kuitira kuti vatengi vazhinji vagone kunakidzwa neyakareruka sexy yakasungwa inounzwa nejasi jasi, uye nekunzwa iwoiye maratidziro mamiriro eazvino tights.
Kune akawanda masayizi eangu akagadzirira-kupfeka hembe. Kuti ukwane mamwe maumbirwo emuviri kumba nekune dzimwe nyika, senge F akateedzana uye T akateedzana, akakodzera renji iri 150-180CM pakukwirira, uye huremu hunobva 40kg kusvika 90KG Iyo nyanzvi yepamusoro-yakasununguka jira zvigadzirwa zvigadzirwa boka, yemhando yekucheka lathe, inogona kuita kuti saizi yekucheka inyatsoita uye inyatsoita basa, uye yayo CAD yakangwara saizi chizvarwa system inobvumidza iyo yechinyakare kugadzirisa kukurumidza kuvandudzwa zvakanyanya.
Isu tinotora "kudhirowa yemafashoni, kuigadzira yeyakanaka" seicho chinangwa chebhizinesi, kuita fashoni seksikäs uye kurega danho ripfeke zvisina basa.
Chigadzirwa chigadzirwa: yakapusa uye inoshamisira yeEuropean neAmerican maitiro!
Dhizaini maficha: Mufashoni yemukati, yemhando yepamusoro. Gadzira zvipfeko zvemukati zvaunogona kupfeka kuti uite fashoni kuti ive yakanyanya!
Basa redu: ita hupenyu huve nani!
Isu takagara tichitungamira nzira inoshamisira uye tinova chinhu chekuteverwa muindasitiri. Yedu izvozvi, kufamba munzira iyo vamwe vanoda kuenda asi vasingashinga kuenda! MiaSein nemoyo wese inounza pamwechete mamwe magero evamiririri uye vadyidzani kuti vagadzire yepasi rose yekutanga sekisheni nzira brand!
Sosi yekugadzira Sosi yepakati
Maindasitiri nekutengeserana kusangana B2B
Vagadziri vane simba, kubatana kwepasirese
Kuyambuka-kumuganhu kupa, kutakura kwepasirese (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX)
Computer ndiro kugadzira, yepakutanga dhizaini,
Komputa yekucheka mubhedha, chigadzirwa chemhando yekutarisa uye kuendesa, nzvimbo yebasa revatengi
1. Chitubu zvinhu kuvandudzwa, CAD dhizaini, kugadzira, kutengesa, maindasitiri uye kutengeserana nzira yekudyidzana, mhando inodzora, kuverengera kugadzirwa kwekuita uye kuburitsa kugona;
2.Ingwaru CAD ndiro-inogadzira sisitimu, muridzi wega-akazvigadzira akangwara-kugadzira dhizaini ine makore gumi ekugadzirisa ruzivo ruzivo inovandudza zvakanyanya maitiro ekugadzirisa uye saizi kunyatso;
3.Tora imwechete chidimbu kugadzirisa, iyo inomhanyisa yekumhanyisa kumhanyisa mukati maawa makumi maviri nemana, mutengi akagadziriswa data anogona kuchengetwa kwemakore matatu;
4. Tinogona kupa yakasarudzika mafashoni hembe kune vatengi hombe kuti vaone kukwikwidza kwezvigadzirwa;
5. Chigadzirwa chikuru chakaongororwa zvakasununguka uye chakagadzirwa. Mucheka wacho haushamisi, wakasarudzika uye unogarisana nharaunda.
3.our akasiyana jira
Mushure mekuedza kwedu kuenderera, huwandu hwekutengesa hweedu spandex latex tights aendeswa kunze kumisika yeEuropean neAmerica yadarika US $ 1 miriyoni. Uku ndiko kubudirira kutsva munhoroondo yekutengesa. Ticharamba tichiwedzera nekuvandudza zvigadzirwa zvedu kuitira kuti zvigadzirwa zvedu zvinyanye kufarirwa. Isu takahaya mugadziri mutsva anozotiunzira zviri nani uye zvine mukurumbira masitaera. Zvigadzirwa zvedu zvakasununguka kupera kubva kumachira ekugadzira, kugadzira uye kutengesa. Izvi zvinotibvumidza kudzora zvirinani chigadzirwa mhando, gadziridza kugadzirwa nenzira inokodzera, inzwa mhinduro yemutengi kwenguva yekutanga, uye nekuenderera nekuvandudza edu ekugadzira masevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvine mukurumbira wakanaka kumba nekunze, uye kutengesa kwemapuratifomu akawanda kumba nekune dzimwe nyika kuri kuramba kuchikura. Vatengi vedu vanosanganisira vanofarira zvipfeko zvekatsi, pamwe nevamiriri vekunze nekune dzimwe nyika uye vatengesi. Vakachengetedzawo kutengesa kwakanaka. Isu tinoshuvira kuti vatengi nekuwedzera vatengi vachasarudza zvigadzirwa zvedu. Tinoshuvira kuti zvigadzirwa zvedu zvitengeswe kukona dzese dzenyika.
Pashure pemakore anopfuura gumi echiitiko, isu takazvimiririra takagadzira yakangwara kukwidziridzwa vhezheni yeCAD ndiro yekugadzira system. Iyo software yehembe yehembe yekugadzira, kukodha, uye dhizaini. Iyo nyowani uye izere-inoratidzirwa nguvo CAD system. Iyi sisitimu inonyanya kukodzera dhizaini uye kugadzirisa kweangu akakosha zvipfeko. Iyo zvine hungwaru inoita kucheka kwedata rakagadziriswa, uye iyo data iri yakajeka, izvo zvinotibatsira kuti tigadzire mbatya dzakakodzera kwazvo dzakagadzirirwa vatengi. Zvipfeko zvedu zvakasiyana nezvipfeko zvakajairika. Zvinoda vakasarudzika vagadziri dhizaini, yakasarudzika tsika machira, akakosha CAD ndiro yekugadzira uye yekucheka masystem, uye ehunyanzvi anotendeuka ekugadzirisa. Kutsvaga kukwana ndicho chinangwa chedu chekusingaperi. Yedu catsuit izere-muviri wakasangana, isina musono dhizaini. Inokwana zvakanaka muchiuno uye inotsvedza kwazvo. Iko hakuna kwekuteedzera kwekupeta kubva kumusoro kusvika pasi. Izvi ndezvekutenda kune edu ehunyanzvi michina uye nyanzvi vagadziri uye nyanzvi vasonera. Kune zvakare kune akazvitsaurira chipfeko chipangamazano kuti akushandire iwe. Chero bedzi iwe uchikumbira zvaunoda, isu tinokwanisa kukupa iwe nembatya iwe yaunoda.
6.Zvinhu zvedu zvitsva
Parizvino, nekuda kwekuputika kwemakoronavirusi matsva muChina uye pasirese, kambani yedu iri kunetsekana nezve izvi. Kubva pamakore edu mazhinji eruzivo mukugadzirwa kwemabhodhi uye mhando dzakasiyana dzekupfeka, isu takavhura mitsara miviri yekugadzira masutu ekudzivirira uye masiki. Yedu sutu yekudzivirira inogadzirwa neinoraswa inofema PE firimu uye isina-yakarukwa inosanganiswa zvinhu. Iyo izere-muviri sutu inodzivirira ine kumberi zipi uye hood. Iyo inouya muhukuru hwakasiyana uye inogona kusavhara mvura, isina guruva, uye inopokana nemabhakitiriya. Inogona kusangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwemazuva ese. Masiki edu akasiyana neasingawanzo kuraswa masiki uye akasiyana nemaKM95 masiki. Iyo inosiya izvo zvakakanganisika zvechinyakare mamask. Yedu mask mask dhizaini yakanyanya mufashoni, ine dema uye chena gingham zvinhu, yakachena nhema jira zvinhu, uye nhema PU inofema yeganda. Inokodzera kupfeka kwevabereki nemwana, uye inogona kushandiswa nevakuru nevana. Iyo ine yakavakirwa-mukati firita inoshandura sheet iyo inogona kudzokororwa kakawanda uye kushandiswa. Iyo inogara yakasimba uye haina kuremara, inochengetedza simba uye inochengetedza zvakatipoteredza, yakachena uye ine hutsanana, yakasununguka uye yakanaka. Kana uchida, unogona kutenga pawebhusaiti yedu, uye unogamuchira vatengesi vekunze nekune dzimwe nyika kuti vauye kuzotaurirana nezvekutenga.